Oromoon Jabinasaa Beekuu Qaba! - Yaada Dhuunfaa Abdii Fiixe
Abdii Fiixe Gaazixeessa Televishiini OMN
Oromoon Jabinasaa Beekuu Qaba!
Namichatu karaa deema. Arba argee dhaabbate. Arbi sun Funyoo/Haada xiqqoo haphiidhaan hidhamee ijaajja. Namtichi baayyee ajaa’ibame. Bineensi amma Arbaa guddatu funyoo/haada xiqqoo tokkoon hidhamee ijaajjuun waan raajiiti. Sibiila miti, cancala miti. Funyoo haphiin miilli isaa hidhamee ijaajja. Otuu Miilla isaa ol fudhatee funyoon/Haadi sun ni citti. Garuu Arbi sunuu hin yaalle. Kutee ba’uu tasumaa hin yaanne.Namtichi kun nama Arba sana hidhe argee gaafate.
Gaaffii – Ani kanan jedhu uumama amma Arbaa ga’u kana akkamiin funyoo/Haada xiqqoo kanaan miilla hiite? Kutee hindeemuu?
Deebii – Kutee hindeemu. Bara inni xiqqoo ture funyoo/Haaduma kanaan hidhaa turre.Yeroo guddatu akka humni isaas jabinni isaas wajjin guddate waan dagateef Kutee ba’uuf hin yaalu, Funyoon/ Haadi sun jabaa waan itti fakkaatuuf of amansiisee ijaajjaa jedheen.
Mee yaadaa Arbi sun otuu Miilla isaa ol fudhatee funyoo/ Haada sana kutee deemee lafa yaade bakka garaa isaa ga’a. Gara Bosonaatti deebi’ee yoo barbaade Hiriyoottan isaatti makata. Garuu xinnummaa isaatti funyoodhuma/Haaduma sanaan waan hidhanii guddisaniif jabina isa kan ofii isaa dagatee Jabina isa kan Funyoo/Haadaa yaadaa ijaajja.
Maatiin keenya waan dur Moototi darban nurraan ga’an malee Jabina keenya har’aa waan nutti himaa nu hin guddisneef, Nutis dadhabina walii keenyaa irratti fuullefannee wal dadhabsiisaa, diinoti keenya har’allee Funyoo/Haada dur abbootii keenya ittiin hidhaa turaniin nu hidhaa jiru. Himata dur Abbootiin keenya ittii du’aniin himatamnee har’as du’aa jirra. Himata Dur abbootiin keenya ittiin Himatamanii hidhamanii ba’aniin har’as Himatamnee hidhamnee baana. Himata dur Abbootiin keenya himatamantu har’a barattoota Oromoo hedduun ittiin himatamanii mana hidhaa jiru. Nutu nu ga’e jechuu dadhabe moo Dhaloota Haaraa ta’uu keenya Dagannee, Jabina keenya Irraanfannee Jabina Funyoo/Haada isaan ittiin nu hidhanii amannee jiraachaa jirra?
Meeqan keenyatu sichi homaa jijjiiruu hindandeenyu jennee si’a tokko yaallee waan kufneef lammata yaaluu sodaannee mana ta’aa jirra? Meeqan keenyatu ammoo Qabsoo Oromoo keessatti otuu ga’ee amma ija sinaaficaa hin gumaachin nama isa jireenya isaa guutuu qabsootti dabarsee waa xiqqoo dogoggore cilee dibuuf Facebook irraa qabsa’a?
Jarana, Kufaatiin filannoodha Malee carraa Miti. Mee kottaa, dhalooti kun Facebook da’oo godhannee wal dadhabsiisuurra carraa Facebook nu gumaachetti fayyadamnee wal ijaarraa. Mee kottaa Facebook irratti Maqaa adda addaa Banannee wal irratti duuluurra Facebook dhaan Odeefannoo waliin geenyee waa wal barsiifannaa! Mee kottaa onnadhaa! Funyoon/ Haadi miilla keenyatti jiru isa moofaa bututaa fi haphii dha jennee akka dhaloota haar’aatti jijjiiramaaf onnannaa!
Abdii Fiixeetiin Yaada keessan gama ‘comment’ dhan isiin eegna!
dhugaa jeette Abdii nuuf jiradhu ammas yaani kee nuu bira hin hafni.
yaadni kun dhugaadha. issinis nutis harkaa waal qabana. bayye garidha.